220V / 110V အိမ်သုံးအစားအစာဖုန်စုပ်စက် - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
220V / 110V အိမ်သုံးအစားအစာဖုန်စုပ်စက်
$24.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $52.99
220V / 110V အိမ်သုံးအစားအစာဖုန်စုပ်စက် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးအစား: မတ်တပ်ရပ် / စားပွဲတင်
နှစ်မျိုး: 220V အီးယူ plug ကို / 110V အမေရိကန် plug ကို
Size: 360 * 54 * 50mm
Magnetic Adsorption: စက်၏အောက်ခြေတွင်သံလိုက် ၂ လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အိမ်သူအိမ်သားအစားအစာ Vaccum Sealer
အသားတင်အလေးချိန် - ၀.၇၅ ကီလိုဂရမ်
ပစ္စည်း: အရည်အသွေးမြင့် ABS
တံဆိပ်ခတ်မြန်နှုန်း: 3-8 အိတ် / တစ်မိနစ်
Operating mode: အလိုအလျောက် + လက်စွဲစာအုပ်
အစိုဓာတ်နှင့်မှို - ခံနိုင်ရည်
пришелмолниеносно။ явшоке။ всеработает။
အားလုံး SUPER !!! ပါလက်စတိုင်းတစ်ပါတ်တိုက်လေယာဉ်ပေးပို့ !!! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!!
Отличноработает, ипрекраснодержитсянамагнитенахолодильнике, несъезжает